Best Video Settings u Radidiyaha ku Samsung Galaxy S4, S3 iyo S2
> Resource > Samsung > taageerayaan Video qaabab Samsung Galaxy S4, S3 Iyo S2
Had iyo jeer ku riyaaqay daawashada cajaladaha ku saabsan telefoonka mobile halka aad ku tagaan? Sidaas oo ay tahayna, waxaan noqon kartaa quruxsan hubin qaab video in ay taageero u telefoonada naga mobile ah. Haddii aad tahay qofka leh oo ka mid ah taxanaha Samsung Galaxy S, akhri on wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan nooca videos taasi socon for loo maqli aad model gaarka ah ee telefoonka (ie Galaxy S4, S3 ama S2).
Qeybta 1: taageerayaan Video qaabab u Galaxy Samsung Taxanaha S
Qeybta 2: Best Video Goobta for Your Samsung Galaxy Taxanaha S
Qeybta 3: horena Video Settings
Asal ahaan, waxaad daawan kartaa MP4 kasta, wmv ama AVI video files labada ah ee Galaxy S4, S3 ama S2 telefoonka gacanta. Kuwaasu waa qaabab file ku badan ama caanka ah loo isticmaalo, iyo waxa ay noqon karaan loo maqli karo ee codsiyada ugu badan.
Samsung Galaxy S4 (5.0 "screen):
DivX, MP4, wmv, AVI
Samsung Galaxy S3 (4.8 "screen):
MP4, wmv, AVI, DivX, XviD, H.264, H.263
Samsung Galaxy S2 (4.3 "screen):
MP4, wmv, AVI, 3GP
The video goob ugu wanaagsan ee sadex tusaale oo Galaxy S kala duwan ka duwan yahay oo kaliya wax yar marka la eego xal. Qaar kale sida heerka jir, heerka yara, channel iyo iwm sii isku weel MP4 ah.
Qaraarka: 854 * 480 ( for S4 iyo S3 ); 800 * 400 ( for S2 )
Rate jir ah, 30 fps
Rate Inyar: kbps 2000
Rate Inyar: 128 kbps
Ha la yaabin in mararka qaar naga taageeray (ama sida la sheegtay) video files aan la aqoonsan yahay ama la jaan qaada, waayo, playbacks. Sababta asaasiga ah waxaa sabab u ah kala duwanaanshaha codec loo isticmaalo in uu kaydiyo labada video ama file maqal ah. Waa waqti dheeraad ah oo wax baabbi'iya oo adag haddii aadan ogeyn in aad taas goobo gaar ah si ay ula qabsadaan aad videos. Haddii ay sidaa tahay, waxaa laga yaabaa in aad u badalo la rabto Converter Wondershare Video Ultimate .
Video Converter Ultimate Waxay bixisaa kala duwan oo badan oo qaabab wax soo saarka horena laga bilaabo qalabka mobile kala duwan si ay kulan oo consoles'ka iyo sidoo kale qaabka uu jecel yahay ee noocyada file.
Sida a user Samsung Galaxy S, waxaad si fudud u isticmaali kartaa in ay doortaan aad doorato telefoonka mobile ka Qaabka Output> Device> Samsung. Just guji nooca mobile aad iyo aad u yeelan doontaa in aad u aragto qaabka ugu wanaagsan video loogu talagalay qalab aad .
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan video iyo codec audio, waxa aad helaysaa in guji Settings .
Screenshot video goob ugu wanaagsan ee Galaxy S4 iyo S3
Screenshot video goob ugu wanaagsan ee Galaxy S2
Talinayo Video qaabab Fiiro Galaxy 3
Sida loo Play MP4 on Galaxy S4
2 Siyaabaha Ma Samsung Data Recovery inaad barataa
Samsung video Converter - video in telefoonada Samsung
4 Waxyaabaha ay tahay in aad Ogaato ku saabsan MP4 iyo Samsung
Samsung + Kies + Windows 8 = gaabinta !!!
Sida loo Fallaadha gan, oo Edit Video 4K ku Fiiro Galaxy 3
2 Siyaabaha la isu saar Music on Samsung Galaxy I7500
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka Samsung Galaxy Core
SMS Transfer, Music, Video, Photos iyo Xiriirada ka iPhone in Samsung